Facetune 2, isbeddel toos ah oo ku wajahan diiwaanka lacagta | Wararka IPhone
Facetune 2, waa isbeddel toos ah oo loogu talagalay diiwaanka lacagta
Facetune shaki la'aan waa mid ka mid ah codsiyada taasi ayaa ugu guulaysatay Dukaanka App-ka dhowrkii sano ee la soo dhaafay, maaddaama ay na siisay ikhtiyaar aan ku hagaajinno sawirrada lala qaaday iPhone-ka ilbidhiqsiyo gudahood hab aad u wanaagsan oo ku jira ilbidhiqsiyo gudahood. Hadda Lightricks wuxuu la soo noqonayaa daabacaad labaad oo noo keenaysa horumar wanaagsan laakiin sidoo kale aan fiicnayn.
1 Si aad uga sii fiicnaato
Si aad uga sii fiicnaato
Imaatinka daabacaadda labaad ee Facetune waxaa weheliya muuqaal si aad ah ay u dalbadeen dadka isticmaala nooca koowaad, waana mid kale oo aan ahayn tafatirka tooska ah. Taasi waa, mar kasta oo aan isbeddel ku sameyno dib-u-hagaajinta, waxaan arki doonnaa isla waqtigaas, annaga oo aan sugin xitaa inaan sawir qaadno sidaas awgeedna waxay keeneysaa waqti aad u muhiim ah oo aan badbaadinno marka aan sameyno dib-u-hagaajinno badan oo ku xiran qaabka sawirka.
Waxyaabaha kale ee horumarineed ee xusidda mudan ayaa ah dejinta cusub (gaar ahaan iftiinka firfircoon ee sawir qaadista) oo noo oggolaanaya wax yar sii soco markaan maaraynayno muuqaalka qofka aan dib u hagaajinayno. Intaa waxaa dheer, Lightricks waxay ku dartay nidaam dib u dhisaya wajigeena 3D si ay u awoodaan inay ka dhigto hagaajin aan macquul aheyn ku dhowaad codsi kasta oo kale labadaba tayada iyo saxsanaanta.
Waana halka ay dhibaatadu ka timaaddo, oo halka isticmaaleyaashu ay galeen xanaaq. Halkii aad ka heli lahayd codsi dhammaystiran oo leh dhammaan qalabkiisa qiimo go'an, Lightricks ayaa doortay laba nooc oo kala duwan: Waxaan u iibsan karnaa taabashada si shaqsi ah (taasoo keentay biil aad u badan) ama waxaan uqori karnaa dalabka qiimayaasha umuuqda inay xoogaa ka sareeyaan waxa dadku u arkaan macquul.
Diiwaangelinta bixisa helitaanka buuxa waxay u socotaa 1,99 euro bishii, 9,99 euro sanadkii ama 29,99 yuuro oo loogu talagalay diiwaangelinta nolosha oo dhan, qiimaha laga yaabo in la caddeeyo laakiin haddii aan raacno isbeddelka caadiga ah ee suuqa waxaa loo qaadan karaa mid aad u sarreeya. Waana wax aysan isticmaaleyaashu seegin, maaddaama dib u eegista dalabku ay uruursanayaan fikradaha xiddig ka cabanaya qaabka ganacsi ee cusub ee ay soo rogtay Lightricks iyo qiimaha ay shirkaddu ku dejisay arjiga.
Xaqiiqdu waxay tahay marka dib loo hagaajinayo sawirrada, codsigan cid la tartantaa ma leh marka la eego saamiga xawaaraha / natiijooyinka. Qiimaha qofkii wax yar adeegsadaa wuu noqon karaa mid xad dhaaf ah, laakiin waa run oo haddii aad siiso adeegsi joogto ah dhamaadka waxaan ka hadlaynaa in ka yar hal euro bishii, taas oo u muuqata mid macquul ah.
Facetune2 by Lightricksfree
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Facetune 2, waa isbeddel toos ah oo loogu talagalay diiwaanka lacagta
Way iga qoslisay inaad difaacdo waxa noocaas ah. Waa xishood la’aan! Iyo iyada oo aan la tirin dhammaan dadka horeyba ugu bixiyay qaabkii hore. Iyada oo ay dadka noocaas ahi nolosheena oo dhan ku kaftami doonaan, way iska cadahay
Ku jawaab Zexion
LaMetric, oo ah mid smartwatch u gaar ah qaybteeda
Nooca cusub ee barnaamijka webka Sawirrada ayaa hadda loo heli karaa qof walba oo ku jira icloud.com